Idatha yokuHanjiswa kweFowuni yeHuawei kunye neFayile kwiNew Smartphone, i-Emulator.online ▷ 🥇
Ngaba uthenge i-smartphone entsha kraca kwaye ngoku ungathanda ukudlulisa yonke idatha yakho kwiselfowuni yakho endala uye kweyakho entsha? Isisombululo kukuba Ifowuni yeHuawei, Isicelo esenziwe yinkampani eyaziwayo yaseTshayina, epheleleyo, yamaqonga amaninzi kwaye ke iyahambelana nazo zombini i-Android kunye ne-iPhone.
Esi sicelo silunge kakhulu kwabo batshintsha kwi-iPhone baye kwi-smartphone entsha ye-Android kwaye, ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kwabo batshintsha ifowuni yabo yeHuawei baye kolunye uphawu (ukusukela namhlanje iifowuni zeHuawei ngokuqinisekileyo zithengisa ngaphantsi kwithuba elidlulileyo).
FUNDA OKANYE:Dlulisa idatha ukusuka kwiselfowuni enye ukuya kwenye ngokuzenzekelayo
Con Ifowuni yeHuawei Kungenzeka:
dlulisa idatha ukusuka iPhone/iPad i-smartphone Huawei kwaye ngokuchaseneyo;
dlulisa idatha ukusuka iPhone/iPad i-smartphone Android kwaye ngokuchaseneyo;
dlulisa idatha kwi-smartphone Android i-smartphone Huawei kwaye ngokuchaseneyo;
dlulisa idatha phakathi kwee-smartphones Huawei.
Iifayile ezinokudluliselwa kunye nedatha
yo data ezinokudluliselwa nge Ukutsala kwefowuni Zizo zilandelayo:
Ngezizathu zokhuseleko ezibekwe ngu Android kukho idatha ethi hayi ingadluliselwa:
idatha evela kwizicelo ezinje ngeWhatsApp;
idatha efini: umzekelo, iifoto ezigcinwe kwiifoto zikaGoogle;
Ungayitshintsha njani idatha ngeFowuni Clone
1) Kuqala kufuneka ufake usetyenziso lwasimahla Ukutsala kwefowuni kuzo zombini izixhobo. Ukuba ii-smartphones zombini Huawei uya kufumana isicelo esele sifakiwe.
2) Nje ukuba usetyenziso lukhutshelwe, kufuneka luvulwe kwizixhobo zombini kwaye ucofe "Ukwamkela" Ezantsi ngasekunene;
3) Kuzo zombini izixhobo, isiqinisekiso ukuze ukwazi ukufikelela kwidatha yakho;
4) Nje ukuba unike imvume kwi-smartphone yakho yakudala, ikhamera iya kuvula ikubuze ukuba usete i Ikhowudi ye-QRNgelixa kwi-smartphone entsha kuya kufuneka ukhethe uhlobo lwefowuni yakudala phakathi "Huawei", "Enye i-Android", "iPhome / iPad". Khetha eyiyo kwaye Ikhowudi ye-QR.
5) Nge-smartphone endala, isakhelo se Ikhowudi ye-QR: Ukusuka apha ukuzama ukudibanisa phakathi kwezi zixhobo zimbini kuya kuqala, emva koko isiqinisekiso unxibelelwano ngumsebenzisi ngefestile ezivelelayo-.
6) Ngoku ungabonisa ukuba zeziphi iifayile oza kuzidlulisela kwi-smartphone endala "Iyavela"ezo zinomdla kuwe.
7) Cinezela "Uqinisekiso" kwaye inkqubo yokufuduka kwedatha iya kuqala ngokuzenzekelayo.
Ukuhanjiswa kwedatha kwenziwa ngekhonkco yohlobo IWifi yenziwe kule nto phakathi kwezi zixhobo zimbini: Ngale ndlela inkqubo iya kuba ukhuseleko mi khawuleza.
Ukuba unedatha eninzi, ukufuduka kungathatha imizuzu eliqela, kodwa ixesha elishiyekileyo isalathiso liza kuvela kwiscreen. Ukuba unxibelelwano phakathi kwee-smartphones luphazamisekile, inkqubo iya kuphindwa kwaye ukuhanjiswa kuya kuqala kwakhona apho ime khona.
FUNDA OKANYE: Tshintshela kwi-Android uye kwi-iPhone kwaye ugqithisele yonke idatha
Uyithumela njani i-imeyile njengesiqhoboshelo
Sebenzisa imiyalezo yexeshana kuWhatsApp, ethi inyamalale emva kweentsuku ezisi-7
Ungayitshintsha njani ifonti kwiHuawei smartphone
Indlela yokutshixa i-iPhone, zonke iindlela
Ungayitshintsha njani i-iPhone yakudala iye entsha
Uyenza njani imijelo yabucala ye-YouTube yosapho, abahlobo kunye noogxa
Uyenza njani iividiyo eziMnandi eziFutshane ngeeReels ze-Instagram
Iimpawu kunye nabalinganiswa abakhethekileyo kunye nebhodi yezitshixo
Isicelo sokujonga abantwana abangaphandle kwekhaya
Ifowuni entsha ye-Android? Uyidlulisa njani yonke idatha kwifowuni endala
Ungayinquma njani ividiyo kwi-WhatsApp